Recology CleanScapes | Baqshadaha Macluumaadka Goobaha Qoysaska Badan iyo Ganacsiyada ayaa Boosta La Soo Diray
Baakadaha Soodhawaynta ayaa loo diri doonaa maareeyaha milkiyadda dhisme kasta iyo/ama maareeyahay koontooyinka diiwaanka ku jira oo waxa ka mid noqon doona:
Sicirrada iyo adeegyada
Tilmaamaha dib-u-warshadaynta iyo qashinka cuntada iyo ardaaga
Su'aalaha badiyaa la waraysto
Bixiyahaaga adeegga ee xaadirkan ayaa qaadi doona qashinka ilaa dhammaadka Mey. Gawari-gacmeedkaaga ayaa meeshooda oolli doona oo Recology CleanScapes ayaa bilaabi doonta qashin qaadka toddobaadka Juun 1. Gawaari-gacmeedyadaada iyo weelashaada qashinka ayaa dib loogu calaamadayn doonaa macluumaad cusub gudaha Juun.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto biilal ku dallaca ama weyddiisyada adeegga heeganka ah kahor Mey 31 eeda, fadlan kala xiirir Maamulka Qashinka (Waste Management) taleefanka 800.592.9995 . Haddii aad jeceshahay inaad beddesho weynida weelkaaga ama jadwalka qashin qaadka kaddib Mey 18keeda, fadlan la xiriiir Recology CleanScapes. Weydiisadyada isbeddellada heerka adeeg ayaa la oofin doona kaddib Juun 2eeda.
Haddii wax su'aalo ah oo ku saabsan adeegyadaada cusub ee Recology CleanScapes aad qabto, fadlan nagala soo xidhiidh 206.767.3322 ama Burien@recology.com.